Yakasarudzika 'SuperShe Island' yekutandarira iparadhiso yepabonde ine yakaoma isina-varume mutemo
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » tsika nemagariro » Yakasarudzika 'SuperShe Island' yekutandarira iparadhiso yepabonde ine yakaoma isina-varume mutemo
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • tsika nemagariro • Finland Kuputsa Nhau • Hospitality Industry • Kodzero Dzevanhu • Nhau Dzakanaka • nhau • vanhu • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Trending Now
Nzvimbo yakasarudzika yechitsuwa inoshandirwa chete yevakadzi yakagadzirirwa kuvhura mhenderekedzo yeFinland, neyakaomarara isina-varume mutemo unoshanda.
Iyo brainchild yemumwe muzvinabhizimusi Kristina Roth, 'SuperShe Island' inovavarira kukurudzira vakadzi uye kuvabvumira kuti vatarise pazviri pasina kukanganiswa kwevakomana kana vasikana. Chitsuwa ichi chichavhura vashanyi muna Chikumi, asi avo vanofarira kutora testosterone-yemahara zororo vanofanirwa kunyorera pamberi pehukama hwehukama, maererano newebsite.
Vhidhiyo yekusimudzira yechitsuwa ichi inoratidza yakanakisa nzvimbo yekutandarira inopa zororo uye hwomutambarakede, zvisinei kungova mukadzi hakuzokwana kuita kucheka - mari dzinodiwa pakubata munzvimbo iyi yemadzimai hadzisati dzaziviswa.
Roth ndiye muvambi uye aimbova CEO weMatisia Consultants - akatumidzwa zita Forbes semumwe wemabhizimusi evakadzi ari kukura nekukurumidza muna2016. Kambani iyi yaive nemari inosvika madhora makumi mana nemashanu muna45, kubva pamadhora makumi maviri nemaviri muna2015, zvichienderana nenzvimbo .
Muna 2016 'SuperShe' yakatangwa seboka rekubatanidza revakadzi, uye webhusaiti yayo inopa zvinyorwa zvekufamba, kusimba uye vatungamiriri vevakadzi.
Akawanda ehutano anodzosera munzvimbo dzakadai seHawaii atove akarongeka nekambani. Kunyange zviitiko zvacho zvakagamuchirwa zvakanaka, Roth akataura kuti kuvapo kwevarume kwakachinja mamiriro. "Paive nemurume akanaka, vakadzi vaipfekedza miromo," akaudza New York Post, achiona kuti izvi zvinodzikisira kuzviratidza.
Zvinotoshamisa kuti aive murume akatungamira kuna Roth kuvhura yake yevakadzi paradhiso. "Vabereki vake vane chitsuwa pachitsuwa ichi, uye akaramba achindiudza, chitsuwa chiri padhuze chiri kutengeswa," akadaro Roth.
Iko mukana wevashanyi vechirume kuchitsuwa ichi pane imwe nguva hauna kutongwa kunze naRoth, uyo anoti haasi muvengi-murume. Nzira yekusarudzika yechitsuwa ichi haingoshandi kuvarume chete - kusvika parizvino vashanyi chete kubva kuneti shamwari dzaRoth vakakokwa uye vashanyi venguva yemberi vanofanirwa kuongororwa kuti vaone kana "vakakomberedzwa uye vanogona kukwana, "Roth akadaro, achiwedzera" asi ini handidi kuve mukuru. "